Abantu abaningi, ikakhulukazi abesifazane, ukunakekelwa, uma kukhona imvukuzane nezinwele ngobuso. Futhi abanye abakholelwa ngisho nokuthi lokhu kuwuphawu ethile eyimfihlakalo. Ngaphezu kwalokho, iningi lethu awazi ukuthi kungani kukhona abantu bangayithola imfundo enjalo, futhi kanjani ukuqeda kubo. Futhi ngaphambi kokuba ngokuvamile ukuthi abantu ne mshini ezinjalo - izithunywa esihogweni. Ngakho-ke, abathola isahlulelo e esigxotsheni. Kodwa ngemva kwesikhashana, lo wesifazane waqala ukuba bakholelwa ukuthi imfundo enjalo akunakubangelwa imihlobiso, ngisho ngesineke ubuso babo. Kodwa into eyodwa - a umkhangu enhle, enembile, nokuningi - uma siqala ukuvela uhlaza. Khona-ke kuphakama umbuzo: Ingabe kungenzeka ukuyikhipha izinwele kusukela imvukuzane? Manje sizokwenza ukuqonda.
Ingabe kuyazuzisa ke, asikho isidingo sokukhathazeka uma imvukuzane kuqala ukukhula izinwele? Njengoba yabe seyaziwa muva nje, nezimvukuzane - a neoplasm, okuyinto ngaphansi kwethonya ezinye zezici angakhula abe isimila esibulalayo.
Futhi uma ngempela ngokuvamile uthinte le imfundo, kungenzeka ukuba baphathe ukutheleleka, futhi kuphela uzilimaze. Kukhona amacala amaningi lapho i umkhangu abavamile lakhula laba lwesimila. Ngokuyinhloko, abantu bakhathazekile ukuthi birthmarks ezinjalo zingaba zinkulu, convex, ogulayo noma bayokhula izinwele.
Ngingenza kanjani uma izinwele lukhula aphume imvukuzane? Kusho ukuthini? Eqinisweni, lena akuyona inkinga, futhi ungakhathazeki. Udinga ukwazi ukuthi amavukuzi ukuthi sikhiqize isimila engakhuli izinwele.
Futhi, ngokuvumelana ososayensi, lezi zokwakheka awayona ingozi emzimbeni. ethile yabo kuphela - unaesthetic. Isizathu ukuthi imvukuzane phezu izinwele ikhula - kuba kule ndawo abe inqwaba izinwele follicle.
Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuyikhipha izinwele kusukela imvukuzane? Abantu abakhula izinwele imvukuzane, zama ingamthinti noma uzisuse. Phela, besaba ngakho uzilimaze. Kodwa ungakhathazeki. Kunezindlela ukuthi ungakwazi ukususa lezi izinwele. Uma wenza kanjalo-ke ekhaya, kungcono ukuyikhipha nge udlawana futhi ngobumnene anqunywe, ukuze singathwesi angabonwa. Futhi lokho akusho ubuhlungu futhi ngeke usizo ukuqeda izimila ecasulayo isikhashana. Asikho isidingo ukuphetha ngokuthi khona izinwele kuwuphawu kwezinso sina emzimbeni noma esikhumbeni. Kodwa ngokuvumelana idatha yakamuva, kungenzeka ukuba une-operation ukususa uboya imvukuzane.
Ngaphambi kokuqhubeka ukususwa izinwele imvukuzane, kumele wena bahlolwe ngayo nefunda ngayo sizokwazi ukusho ukuthi kungenzeka ukuthonya ama izimila engadingeki.
Kuleso simo, uma ususa imvukuzane izinwele uqale ukuthi liguquke, ukulimaza, ayaconsa, kumelwe ngokushesha kudokotela. Ngakho-ke, njengoba kushiwo ngenhla, kubalulekile, ngaphambi kokuqhubeka ekususweni izinwele, xhumana nodokotela. Ngakho kungenzeka ukugwema nemiphumela ebuhlungu.
Kwenzeka kanjani kusuka? Futhi kungani ezinsumpeni ukhule izinwele?
Birthmark ingavela ngenxa yofuzo.
Uma uguqula amazinga ama-hormone sowesifazane. Ngokuvamile lokhu kwenzeka ngesikhathi abantwana. Kodwa ngaphandle ukuthi kukhona amavukuzi ngesikhathi sokukhulelwa intsha lo mkhuba bubonakala. Futhi zonke ngoba lokho kule nkathi kukhona ukuthomba okusheshayo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukhule izinwele ngisho ngesikhathi menopause phezu imvukuzane.
Ngaphansi kwethonya emisebeni ultraviolet esikhumbeni nalo ekuthuthukiseni amavukuzi - nevi. Nge ukuvezwa kwesikhathi eside yelanga emzimbeni isikhumba komuntu kuthoma ukuzwa ukucindezeleka. Lokhu kuholela ukukhiqizwa kakhulu melanin, futhi ngenxa yalokho - ukukhula nezimvukuzane.
indawo Obleduyte phambi izinwele ukususwa
Uma umuntu emzimbeni wakhe wathola indawo entsha, lapho lungekho uhlaza, nje umcabango: Ingabe kungenzeka ukuyikhipha izinwele kusukela imvukuzane?
Ngaphambi kokuzama ukususa, kodwa kufanele sinake indawo elalisanda kumiswa.
izinwele kungenziwa kususwe ezinsumpeni ukuthi flat futhi yayincane, futhi uma emaphethelweni iyashelela. Lezi zokwakheka - ephephile kakhulu.
Uma imvukuzane inkulu futhi inamandla imiphetho okungajwayelekile, ikhonza, kuyilapho wokudonsa izinwele ingasetshenziswa kuphela ngemva udokotela iyobheka imfundo nokuziphatha ukuhlolisisa egcwele.
Lapho umuntu inkinga ukuya kudokotela ngombuzo, kungakhathaliseki kungenzeka ukuyikhipha izinwele kusukela imvukuzane, uyasiphendula engasetshenziswa kuphela sostriganiyu noma izindlela ezikhethekile ukulahlwa.
Okungamelwe ukwenze ukuqeda izinwele engafuneki imvukuzane?
Ezinye ukuqeda izinwele zabo by ukushefa, ke sebekubeke asikwazi ukwenziwa, ngoba ukudla kungalimaza ebusweni imvukuzane. Ngenxa yalokho, lapho uzothola ukutheleleka angaya septicemia, isimila ukukhula.
Enye indlela, okwenza kungabi izinwele - it is waxing. Kodwa lapho izinwele elimila imvukuzane, uyisuse ngale ndlela kuyinto engenakwenzeka. Ukwenza kanjalo kungalimaza izingxenye zomzimba.
Ukuze ususe izinwele by depilation chemical nqatshelwe ngenxa yokuthi futhi kuhlukumeza ubuqotho endaweni inkinga kwesikhumba.
ukuyikhipha nge udlawana (ikakhulukazi uma amavukuzi yokukhula izinwele ebusweni) akufanele nhlobo ngaphandle kwemvume udokotela. Le nqubo kuyingozi kakhulu uma kwenziwa ngobudedengu. Khona-ke angagcina isimila esibulalayo. Susa uhlaza kuphela ngemva ibala iye wahlola ngokuphelele futhi kwadokotela kwatholakala ukuthi ingozi.
Kuthiwani uma kwakukhona umkhangu ekhanda lakhe?
Lapho imvukuzane ekhanda, ukuthuthukiswa kwalo kunqunywa lapho likhona, futhi lapho uba nombala. Kulokhu, udinga ngokucophelela ukuba baziphathe nale ukwakheka ekhanda, ikakhulukazi lapho ecwaninga kanye kuyiwe barber. Ukuze uqaphele ke ingozi ye umkhangu ezinjalo ngeke pose.
Kodwa ngaso sonke isikhathi yalemitimba mancane futhi ungagxambukeli umnini wayo. Kuleso simo, uma kunenkinga yezimonyo, kungcono ukususa ngokushesha ukwakheka, ukuze ngingasebenzisi ukuyithukuthelisa ukuthuthukiswa zamangqamuzana omdlavuza.
Abantu abadala abangaqondi angabhekana ngayo ngokuphumelelayo nobunzima eyabo. Kodwa ukunakekela okukhethekile kufanele zikhokhelwe inkinga uma kukhona imvukuzane ekhanda wengane. Nalapha, kudingeka ukubukela lokho yakha ngaleso kid. Uma imvukuzane uyisicaba, akuyona phansi sokukhathazeka. Kodwa kungcono kakhulu ukufundisa ingane yakho ukuba ikwazi ukuthwala kahle kule ndawo - hhayi nekama, hhayi ekuqaleni. Futhi uma imvukuzane has simise convex, kungcono ngokushesha uyisuse.
Manje uyazi ukuthi kungani izinwele likhula kusuka imvukuzane. Siphinde wakhuluma ukususwa kwezitshalo ke. Sibukeze kokubili izindlela avunyelwe futhi akuvumelekile. Kunoma yikuphi, kubalulekile ngaphambi noma yiziphi izinqubo ukuba ubonane lukachwepheshe ofanelekayo.
Ibhulukwe infrared. Ukubuyekeza, imiphumela, Izimo
"Skorostrel". Kanjani ukwelapha lesi zokugula
Ihlangano yokuNgeza Radiology, laseKharkov: reception odokotela Izibuyekezo
Yini okumele uyenze uma ungenawo ukuqala umbadlana?
Kuyini into, futhi kungani kubhekwa igama ezingcolile
Indlela yokwenza ubuso okhanyayo ekhaya
Skit - ke ... Chernigov futhi Nicholas Skete
15 isabelomali imibono oyowushintsha ingaphakathi ekhaya lakho